Oovimba beTesla-Funda ukuRhweba
I-Bitcoin Steadies njengoko iTesla ibonisa ukuba kunokwenzeka ukuFumana iNtlawulo ye-BTC
Ngokwengxelo yayo yekota yamva nje yokufayila kunye neKhomishini yezoKhuseleko kunye noTshintshiselwano lwase-US, uTesla unokuqalisa ukwamkela Bitcoin (BTC) njengentlawulo yezithuthi zayo kwakhona.
Umenzi wemoto yombane we-behemoth utyhile kwi-Q3 yakhe yokufaka ukuba ukususela ngoSeptemba 30, inkampani ithenge i-1.5 yeebhiliyoni zeedola ze-BTC. Kuze kube ngoMatshi, uTesla wamkela iBitcoin njengentlawulo yezithuthi kwimimandla ethile kodwa wayimisa okwethutyana lo mkhuba ngoMeyi ngenxa yezizathu zokusingqongileyo. Ngelo xesha, uTesla waphawula kwingxelo esemthethweni ukuba:
"Sinokuthi kwixa elizayo siqale ngokutsha inkqubo yotshintshiselwano ngee-cryptocurrencies ("i-asethi zedijithali") kwiimveliso kunye neenkonzo zethu."
Ngeli xesha, ukufakwa kwe-Q3 yenkampani kukwaveze ukuba "ixabiso lemarike elifanelekileyo" ye-asethi yayo yedijithali ekupheleni kukaSeptemba yayiyi-1.83 yeebhiliyoni zeedola. Imoto yombane ezayo yongeza ukuba:
"Sikholelwa kubukho bexesha elide lwezinto zedijithali njengotyalo-mali kwaye njengenye indlela yolwelo kwimali."
Oko kwathiwa, ngoJulayi, i-CEO ye-Tesla u-Elon Musk waqinisekisa ukuba i-firm iya kuqala ukwamkela i-BTC ngokukhawuleza ukuba imisebenzi yemigodi ye-Bitcoin i-avareji ye-50% ekusebenziseni amandla avuselelekayo. UMusk waphawula ukuba:
"Kodwa okoko nje kukho umkhwa wexesha elide wokusetyenziswa kwamandla ahlaziyiweyo luluntu, uTesla unokukuxhasa oko."
Kuyathakazelisa ukuba imisebenzi yemigodi ye-BTC iye yanda “luhlaza ngakumbi” Ukusukela ekufudukeni kobuninzi babasebenzi basezimayini besuka e-China, edla isixa esibalulekileyo samandla asekwe ngamalahle ekudaleni amandla. Uninzi lwaba basebenzi basezimayini bafudukela e-US, apho ukusetyenziswa kwamandla ahlaziyekayo kwakuyinto eqhelekileyo.
Amanqanaba aphambili eBitcoin aBukelwayo-Okthobha 26
Ukulandela ukuguqulwa kweentsuku ezimbini ukuya kwinqanaba le-60,000 yeedola, i-BTC ibuyisele i-bullish drive yayo njengoko ichukumise i-$ 63,700 uphawu izolo. I-benchmark cryptocurrency okwangoku ibambe ngaphezulu kwe-50 SMA njengoko ilwela ukukhusela indawo yayo ngaphezulu komqobo obalulekileyo we-63,000 yeedola.
Oko kwathiwa, ndilindele ukubona ukuqhubela phambili kwe-bullish kwiintsuku ezizayo ukuya kwi-64,900 yokuchasana elandelwa ukulungiswa kwi-$ 64,000 - $ 63,000 pivot zone.
Okwangoku, amanqanaba okumelana nam akwi-64,000 yeedola, i-65,000 yeedola, kunye ne-66,000 yeedola, kwaye amanqanaba am enkxaso angundoqo akwi-$62,000, i-$61,000, kunye ne-$60,000.
I-Bitcoin Dominance: 46.2%
tags Bitcoin, BTC, Cryptocurrency, iindaba, Uhlalutyo lobuGcisa, tesla
I-Bitcoin iFumana iBentish Sentiment phakathi kweNgxelo yomvuzo weTesla's Q2
Ukuhlaziywa: 27 Julayi 2021
UTesla ukhuphe ingxelo yakhe yemivuzo yeQ2 izolo, ebonise ukuba umnatha wenkampani Bitcoin (BTC) Ukubamba kunexabiso le- $ 1.311 yezigidigidi ukusukela nge-30 kaJuni.
Umenzi wezithuthi zombane akakhange enze naluphi na uhlobo lokuthenga lwe-BTC, kwaye akazange athengise nayiphi na into ayibambayo kwikota yesibini yalo nyaka.
Okwangoku, ingxelo yokuhamba kwemali ibonakalise ukuba i-Tesla ithengise kuphela ezinye zokubamba kwe-Bitcoin kwi-Q1 ye- $ 273 yezigidi. Nangona kunjalo, u-CEO we-Tesla u-Elon Musk wachaza ngaphambili ukuba le ntengiso yayiza kuvavanya ukuthengiswa kweBitcoin. UMusk wathumela umyalezo nge-Twitter ngoJuni 13 esithi:
"I-Tesla ithengise kuphela ~ iipesenti ezili-10 zokubamba ukuqinisekisa ukuba i-BTC inakho [ukucinywa] ngokulula ngaphandle kokuthengisa."
Ngo-Epreli, u-Tesla watyhila ukuba ukubanjwa kwe-BTC yayixabisa i-2.5 yezigidigidi zeedola ngokugcwalisa i-US Securities and Exchange Commission (SEC).
Ingxelo yenkcitho ye-Q2 yenkampani ikhankanye i-BTC kube kanye kuphela phantsi kwe- "Inzuzo" icandelo, eligqamisa izinto ezinikezela ngengeniso yokusebenza, kubandakanya "Ukukhubazeka okunxulumene ne-bitcoin ye- $ 23M."
Oko kwathiwa, ukukhutshwa kwengxelo yezemali kaTesla kuqinisekisa i-tweet yangaphambili kaMusk, eqinisekisa ukuba uTesla wayenayo “Izandla zedayimane” kwaye ngekhe ithengise ukubanjwa kwayo phakathi kwengozi yentengiso.
UTesla ubhengeze ngasekupheleni kukaFebruwari ukuba uza kuqala ukwamkela i-BTC njengeentlawulo zezithuthi zayo. Nangona kunjalo, yabhengeza ngoMeyi ukuba yayingasavumeli i-cryptocurrency ephambili njengentlawulo, icacisa ukukhathazeka kwendalo esingunobangela.
Amanqanaba aphambili eBitcoin aBukela-nge-27 kaJulayi
I-BTC ithumele i-rally enkulu yezolo izolo, iqala nge-4,800 35,000 yeedola ebusuku ukusuka kwi- $ 39,800 ukuya kwi- $ 40,000. I-cryptocurrency ebekiweyo idibene nokuchasana nophawu lwengqondo lwama- $ 37,700 kwaye yalungiswa kakuhle kwindawo yokuxhasa eyi- $ XNUMX.
Nangona kunjalo, iinkunzi zeenkomo zahlasela imarike kwakhona, zithumela imali ye-cryptocurrency kwinqanaba lama-40,500 41,000 eedola, amanqaku ambalwa kude ne-10 zone pivot zone. Emva koko, ezinye iindaba ezivela eAmazon zabangela ukwehla nge-XNUMX% kwiiyure ezimbalwa, kususa uninzi lweenzuzo zosuku.
Oko kwathethi, silindele ukuba iinkunzi ze-BTC ziququzelele enye i-rally kufutshane nenqanaba le-40,000 yeedola kwiiyure ezizayo.
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 37,500, i- $ 38,500, kunye ne- $ 39,500, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 37,000, $ 36,000, kunye ne- $ 35,000.
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 698.5 billion
I-Bitcoin Dominance: 47.4%
tags Bitcoin, BTC, Cryptocurrency, iindaba, Uhlalutyo Technical, tesla
Isithuthi esithengisa umbane sikaDaimler kufanelekile ukuba sithengwe
Ukuhlaziywa: 24 April 2021
Umenzi wemoto obutofotofo uDaimler uxele ukuqhuma kwintengiso kunye nengeniso yekota yokuqala njengoko imfuno inyuka ngamandla kwiimoto nakwiiveni zayo.
Ingeniso yesabelo ngasinye inyuka nge-4,355%, ukusuka kwi- € 0.09 kwi-Q1 2020 ukuya kwi- € 4.01 kwaye inkampani ilindele ukuba imarike yentengiso inyuke okokuqala ukusukela oko yathengisa iChrysler ngo-2007.
Ukuthengiswa kweemoto eziphambili kukwixesha lonke eliphakamileyo kubavelisi bokugqibela baseJamani.
Uphawu lwayo lweMercedes lubone ukuthengisa kuqhubela phambili ngama-22% ukuya kuma-581,270, kunye neqela likaDaimler xa bebonke bebona ukutsiba kwe-60% kwizithuthi eziya e-China.
Inkampani ibhengeze imoto yayo yokuqala yombane kutshanje, iqala ngemoto ye-EQA. Sele ithathe iiodolo malunga nama-20,000. Kwiveki ephelileyo ityhile imodeli yayo ye-EQS Sedan kwaye inezinto ezimbini ezongezelelweyo eziza kutyhilwa kwiinyanga ezizayo.
I-BMW eyimbangi yaseBavaria ibone ukunyuka okufanayo kwintengiso, ngakumbi e-China, eyona ntengiso yeemoto inkulu emhlabeni.
Ukonyuka komda wentengiso uqikelelo ukusuka kwi-8% ukuya kwi-10% emazantsi, ukuya kuthi ga kwi-12%.
Iziphumo eziphambili zekota yokuqala zeDaimler 2021
Ingeniso € 41 yezigidigidi I-Q1 2020: € 37.2 yezigidigidi
Iqela le-EBIT € 5.7 yezigidigidi I-Q1 2020: € 0.62 yezigidigidi
Inzala yeNzala yeQela € 4.4 yezigidigidi I-Q1 2020: € 0.17 yezigidigidi
Umvuzo ngesabelo ngasinye € 4.01 I-Q1 2020: € 0.09
Igosa eliyintloko lezezimali uHarald Wilhelm ubonelele ngokubonakalayo ekuqhubekeni kwentengiso, ekwabelaneni ukuba inkampani ibona ibango elinamandla eliqhubeka kwintengiso ebalulekileyo yase China kwikota yesibini.
Ukuhamba ngokupheleleyo ngombane kusenokwenzeka ukuba kuphuculwe imeko yomda. Umzi mveliso weemoto udume ngokusebenza kwimida esezantsi, kwaye ukukhula okulindelweyo kwintengiso ye-EV kuya kuwa kwisitetimenti sengeniso ukomeleza inzuzo.
UWilhelm uthethe oku: "Siqinisekile ukuba singagcina isantya sokuphucula umda wethu ngendlela ezinzileyo kwaye kwangaxeshanye sandise uluhlu lwethu lwezithuthi zombane."
Ukuchacha okuqinileyo kumzi mveliso weemoto annus horribilis kukhokelele ekuphuculweni kwama-30% kwixabiso lesabelo likaDaimler, kodwa kukho okungakumbi kwitanki ukuya kuthi ga ekuxabiseni isitokhwe.
Nangona uTesla ephethe i-zeitgeist eveliswe libali lotyalo-mali le-EV, apho ihlala iyinkokheli yentengiso ngetshokhwe ende, ingxelo ibonisa iimpawu zokutshintsha okunokwenzeka kuthathelwa ingqalelo abo babizwa ngokuba ngabenzi beemoto.
Kule meko 'ilifa' livakala ngathi alilunganga, kodwa eneneni lithetha kumandla abaluleke kakhulu- abavelisi benjini abangaphakathi (ICE) bayayazi indlela yokuvelisa kwinqanaba kunye nezixhobo zemali zokukhuphisana kwitekhnoloji. Ngokukodwa kunjalo, xa unikwa umdla kuzo zombini iingxilimbela zeetekhnoloji kunye nabathengisi abancinci beetekhnoloji zangaphandle ukuba badibane kunye nee-automakers ezikhoyo.
Ixabiso ekuvunyelwene ngalo kuDaimler okwangoku limele i-16.4% ephezulu (€ 85) kwixabiso langoku le- € 73.
Itshathi yexabiso likaDaimler, amakhandlela osuku olunye, umhla wama-1 ku-Epreli ka-23
Kwabahlalutyi abangama-24 abagubungela isitokhwe, abali-12 banenqanaba lokuthenga kunye nesixhenxe kwinqanaba elingaphaya kwendlela yokusebenza kunye nesihlanu esibanjiweyo; akukho bathengisi.
Imodeli ye-sedan ye-Mercedes EQS yintshatsheli yoluhlu oluphezulu lwe-S-class kwaye ukuba uphononongo lokuqala luyinto edlulayo, kubonakala ngathi lubethe uphawu.
Nangona kuncinci okwaziwayo ngenkqubo yokuqhubela phambili yokunceda abaqhubi (i-ADAS) esetyenziswa nguDaimler kwiMercedes yayo, ukuthembela kwayo okunzima kwiLiDAR-eyaliwa ngokudumeleyo ngumsunguli weTesla uElon Musk - ngokubambisana neekhamera, ithatha indlela eyahlukileyo kwi-Autopilot kaTesla, ethi Ixhomekeke kwizenzi ze-ultrasonic, iikhamera kunye ne-radar.
Kodwa iinqwelo ze-ICE ziqhuba kakuhle. Iimodeli zodidi lwe-S kunye neeSUV zombini ziyabhabha ngaphandle kwendawo yokubonisa kwaye icandelo leelori liyasebenza kakhulu. UDaimler uzimisele ukuba kwindawo yokubonelela ngeelori zombane kubo bonke abathengi kwimimandla yayo ngo-2022.
“Ukuhanjiswa, ingeniso kunye neenzuzo zonyuke ngokubalaseleyo, ngakumbi ngenxa yomsila e-China, umxube wemveliso onamandla kunye namaxabiso afanelekileyo, axhaswa kukuphuculwa kokusebenza kwemizi-mveliso kunye nolawulo lweendleko. Emva kwesi siqalo sithembisayo, siqinisekile ukuba singagcina isantya sokuphucula imida yethu ngendlela ezinzileyo kwaye kwangaxeshanye sandise uluhlu lwethu lwezithuthi zombane, ”utshilo uWilhelm.
IMercedes-Benz iphambi kwegophe kude kube ngoku isicwangciso-qhinga sayo esabhengezwa ngo-Okthobha, apho sizibekele khona iinjongo zokuphumeza imida yokuthengisa enamanani aphindwe kabini ngasekupheleni kuka-2021.
UDaimler ujikeleza isahlulo selori- njengeDaimler Truck - enoluhlu olwahlukileyo lwemakethi yaseFrankfurt ngasekupheleni kuka-2021, kwaye iMercedes-Benz isebenza njengeshishini elahlukileyo. Inkampani iyathemba ukuba le ndlela ijolise ngakumbi iya kunceda ekufumaneni ixabiso elikhulu labanini zabelo ukuya phambili kwixesha lokukhutshwa kwe-zero.
Ezinye izinto zesicwangciso kufuneka zikhathaze uTesla. Izicwangciso zayo zokonyusa ingeniso ephindaphindayo ngokusebenzisa uhlaziyo lomoya kunye neenkonzo zokubhaliselwa, kugxila kwimisebenzi engundoqo, ukunciphisa isiseko seendleko kunye nokuba yinkokeli kumqhubi wombane nakwisoftware yemoto.
Kukho impukane enye ebalulekileyo kwioli echaphazela uDaimler kunye nabakhuphisana nayo - ukunqongophala kweetshipsi. Kule veki nje uDaimler ubhengeze ukuqaliswa komsebenzi wexeshana elifutshane labasebenzi bayo abangama-18,500 XNUMX ngenxa yokunqongophala.
Ibango leetshipsi kwizixhobo ezinjengeelaptops kunye neetafile, ukulungiselela iimfuno ezonyukayo ngexesha lobhubhane ngenxa yokusebenza kude kunye nemfundo, kube negalelo kunqongopheleko kumxokelelwano wokubonelela. Ukongeza, iimoto zangoku zixhomekeka ngakumbi kwiitshipsi zeempawu eziphambili kunye nokusebenza.
Kodwa nasemva kokuthathela ingqalelo ubunzima obunje, ikamva lijongeka liqaqambile kuDaimler, ethethelela ukuthengwa kwestokhwe.
Thenga izabelo zikaDaimler nge-0% yekhomishini kwiqonga lotyalo-mali lehlabathi eToro.
tags abavelisi bezithuthi, daimler, UDaimler (DAID), ilori enesidima, mercedes, tesla
IIPROJEKTHI EZI-3 ZE-TESLA KUFUNEKA ZIBE KUYO YONKE IRADA YABARHWEBI
I-2020 ingunyaka obalulekileyo kwizithuthi zombane kunye nenkampani yamandla acocekileyo uTesla kunye nomphathi we-maverick u-Elon Musk. Inkampani ivelise imoto yayo yombane yesigidi. Imodeli yeTesla 3 ngoku ibekwe njengeyona iplagi ithengiswayo kwimoto yombane. Kwaye ngaphezulu, uTesla ukwenze i-81% yeemoto zombane ezithengiswa eUnited States kwikota ezimbini zokuqala.
Lo ikwangunyaka apho uTesla abhengeza ukwahlulwa kwesitokhwe ezintlanu ukuya kwesinye ukwenza isitokhwe seTesla sifikeleleke ngakumbi kubatyali mali abancinci. Amaxabiso okwabelana aphakama xa babhengeza ukuhamba ngo-Agasti.
Nabani na obekhe wajonga ngokusondeleyo kwinkampani yezobuchwephesha okwethutyana uyazi ukuba ukulandela isitokhwe sikaTesla yinto yokukhwela ngokukhawuleza. Ngo-Septemba, isitokhwe seTesla salahlekelwa sisinye kwisithathu sexabiso laso kwiveki emva kokuba sikhutshiwe ukuba sifakwe kwisalathiso se-S & P 500. Kodwa njengoko uTesla eqhubeka nokukhokela indlela kwiZithuthi zoMbane kunye nokubaleka itekhnoloji yokuziqhuba, abatyali mali abaninzi babheja ukuba inkampani isendleleni elungileyo yokuguqula ikamva lezothutho. Ukusukela ngo-Okthobha u-2020, abahlalutyi beemarike baphakamisa amaxabiso abo kwizabelo zeTesla zaya kwi- $ 500 ukusuka kwi- $ 475.
I-Tesla ineeprojekthi ezininzi ezintsha, eziguqula umhlaba kumbhobho. Apha sihlola ezintathu eziza kuba nefuthe elibalulekileyo kwisitokhwe seTesla, ngenye indlela okanye enye, kule minyaka izayo.
Kubo bonke abantwana abakhule bekholelwa kwikamva baya kujongeka ngathi yi-movie ye-80s sci-fi, iTesla's Cybertruck ikhathaza iibhokisi ezininzi. Umphathi we-Tesla u-Elon Musk uchaze isithuthi "njenge-cyberpunk yexesha elizayo, i-Blade Runner pickup truck". Ukumangalisa i-aesthetics ecaleni, isithuthi sinamabhongo aphakamileyo ekufuneka siwenzile. Esi sithuthi sisebenza ngombane, sisebenzisa ibhetri, kwaye sisebenza ngokukhanya senzelwe ukuba sibambelele esizinzileyo samandla kwizigidi zeelori ezirhuqa igesi ngoku ezindleleni zethu.
Iprototype ekugqibeleni yatyhilwa kwiTesla Design Studio eLos Angeles nge-21 kaNovemba 2019 phakathi kwe-laser-light fan fan. Ukutyhilwa okukhulu kwabetha i-snag ehlazisayo nangona kunjalo xa uMusk ngempazamo waphula iifestile zesithuthi ngelixa wayezama ukubonisa ukomelela kwabo. Le fiasco ibone ixabiso lesabelo sikaTesla nge-6%. UMusk naye wafumana iziphumo ezibi kunye nomnatha wakhe wexabiso owehle nge- $ 768m ngosuku olunye. Thetha ngokuhlawula ixabiso.
Ngaphandle kwale ngxaki, uCybertruck uzibonakalisile ukuba uyathandwa luluntu. Iiyunithi ezimangalisayo ezinesiqingatha sesigidi sele zi-odolwe kwangaphambili. Imoto enye ye-RWD uCybertruck iseshedyuli ukuba ikhutshwe ngasekupheleni kuka-2021, ngelixa ii-motor-wheel all-wheel and tri-motor versions kulindeleke ngasekupheleni kuka-2022. Iya kuba kukukhwela okuthe tyaba kweCybertruck ukusukela apha ukuya phambili.
2. Ii-EVs ezifikelelekayo
I-Tesla ibithembisa ngeZithuthi zoMbane ezifikelelekayo (ii-EVs) ezifikelelekayo ebantwini ukusukela oko zaqala. Ngokwenkomfa ebibanjwe ngeyoMsintsi kulo nyaka, umenzi weemoto ubonakala ngathi ujonge kufutshane neli phupha.
Ngomhla, uMusk wahlekisa ukuba i-25,000 yeedola, i-Tesla ezizimeleyo ngokupheleleyo inokufika "kwisithuba seminyaka emithathu". UMusk ukwacacisile ukuba le modeli intsha iya kuqhayisa ngohlobo olukhulu lokuqhuba, yonyusa ubomi bebhetri, kwaye iphindaphindwe kahlanu ngakumbi amandla.
Iindaba ezihlulahlula phakathi kwabahlalutyi beemarike. Abacebisi ngezezimali abaliqela babengenamdla kulindelo lweminyaka emithathu kunye neenkcukacha zesiketshi ezichaziweyo ngale moto imfihlakalo, ikhokelele ekubeni kucinywe i-50 yeebhiliyoni zeerandi kwixabiso lemarike kaTesla ngalo mhla. Kwelinye icala, kuhlala uninzi lwabatyali mali be-tech-utopian abakholelwa ukuba ii-EVs ze-Tesla zisasebusaneni kwaye iindleko eziphantsi ziya kukhokelela kuphela ekukhuleni okubonakalayo. Uqikelela ntoni?
Nasi esinye isizathu sokuba abatyali mali bahlale bethatha isithembiso sika-Elon Musk ngentwana yetyuwa. Kwi-2019, uMusk wabhengeza: "Kunyaka olandelayo, ngokuqinisekileyo, siza kuba ne-robotaxis engaphezulu kwesigidi endleleni." Njengoko i-1 isondela esiphelweni, ngoku kukhuselekile ukuba inguquko yeRobotaxi ayizukufika kulo nyaka, ngapha koko.
Iprojekthi kaTesla robotaxi imiselwe ukuguqula izithuthi zikawonkewonke. Uthungelwano lwezabelo zokukhwela luyilelwe ukubeka iiteksi zokuziqhuba ngokwakho endleleni ezinikezela ngenkonzo efana ne-Uber. Ezi robotaxis ziya kudityaniswa neekhamera zokuzifundela, iisenzi, kunye neekhompyuter ezinokuxhasa ukuqhuba ngokuzimela kwindawo apho kungekho mntu ufunekayo kwivili. Amalungu oluntu aya kuthi emva koko akwazi ukubhukisha ukukhwela kwabo ngokusebenzisa i-bespoke app. Khawube nomfanekiso-ngqondweni wale meko — isithuthi esingakhange siqhube sishiya ngaphandle kwendlu yakho, sikusa kude ukuya kwindawo oya kuyo.
UMusk wanyanzelwa ukuba enze malunga nobuso malunga nesithembiso sakhe esibhakabhaka ngo-Epreli ka-2020, evuma ukuba itekhnoloji ye-robotaxi yayithatha ixesha elide kunokuba bekulindelwe ukuba igqibelele. "[P] ukungaziphathi kakuhle ayisosinxibo sam esomeleleyo, kodwa ndihlala ndifumana isiphelo," yatsho le ngxowa-mali yoshishino. UMusk usenombono wokuba iTesla izakuyivula i-robotaxis yayo kule minyaka izayo, kunye nokuqaliswa okuthambileyo okunokwenzeka kuqikelelwe ngo-2021.
Ukurhweba kweTesla Stock
Njengoko sihlolisisile, ikamva lesitokhwe seTesla linokuya nakweliphi na icala ngesaziso somzuzwana. Nokuba i-tweet elula ka-Elon Musk ingathumela i-stock kwi-dive-dive, njengoko kwenzekile ngoMeyi 2020 xa uMusk engaqhelekanga wathumela uluvo lwakhe lokuba isitokhwe sikaTesla sigqithisiwe, sibangela ukuba isitokhwe sihle ngaphezulu kwe-10%.
Ngethamsanqa, abathengisi banokwenza inzuzo nokuba yeyiphi na indlela eyalela isitokhwe seTesla ngentloko ngokuthengisa iiCFD ngeLonghornFX. Izibonelelo zokurhweba iiCFD kukuba ivumela abathengisi ukuba bazuze kuzo zombini inkunzi kunye neemeko zentengiso ngokunika abathengisi ithuba lokuvula izikhundla ezide okanye ezimfutshane.
I-Tesla yoRhwebo kunye nezinye izitokhwe ezingama-64 kunye ne-Forex, i-Cryptos, ii-Indices, kunye nokunye, zonke zinokuphakama kwe-1: 500. Vula iakhawunti yakho yeLonghornFX ngobuncinci bedipozithi eyi- $ 10 nje!
YORHWEBO TESLA NGOKU
Vula iakhawunti ngeLongHorn FX Apha!
tags upapasho ndaba zekhampani, tesla, TSLA